Mianara bebe kokoa momba nyGO
Wuwei Hailun New Material Technology Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny volana aprily 2013. Famokarana novolavolain'i Jiashan Hailun Fine Chemical Plant. Any amin'ny faritany indostrialy Tumen any amin'ny faritr'i Gulang any amin'ny faritanin'i Gansu, dia misy toerana misy toerana ambonimbony kokoa sy toerana mahafinaritra, miaraka amin'ny Hexi Corridor, tany efitra tengger eo akaiky eo. Izy io dia ivon'ny fifandraisana amin'ny làlambe Silk.
Ny foto-kevitray dia: fifanakalozana ny fahatokisana sy ny fanohananao amin'ny serivisy sy fahatsoram-po, tombontsoa mifanampy, mamorona win-win miaraka.
Vokatra kalitao, serivisy kilasy voalohany
Miasa mafy izahay amin'ny famokarana mifanaraka amin'ny fenitry ny rafitra ISO9000.
Faritra: 15000 metatra toradroa
Mpiasa: olona 50
Manana fototra famokarana simika matihanina
Manana fitaovana mandroso
Afaka mianatra bebe kokoa momba anay ianao eto.
Wuwei Hailun New Material.
ampifamadiho ny fahatokisanao sy ny fanohananao amin'ny serivisy sy fahatsoram-po, tombontsoa mifanampy, mamorona fandresena miaraka.
Mirefy 15000 metatra toradroa ny velarany
Aminikuanidine bicarbonate, aminoguanidine sulfate, hidrôlorida aminoguanidine
ny mpiasanay dia manana mpiasa 50 amin'izao fotoana izao.
Ny orinasanay dia manolotra teknika sy fitaovana mandroso amin'ny fanamboarana. Mandritra izany fotoana izany dia misy ny rafitra fitiliana kalitao feno mba hanomezana toky ny mpanjifa midadasika miaraka amina vokatra avo lenta.
Ny orinasa dia manana tobim-pamokarana simika matihanina ao amin'ny valan-javaboary Tumen Town, County Gulang, Faritanin'i Gansu.
avy amin'ny adminAug-08-2020
Fepetra ilaina amin'ny fampiasana azo antoka a ...
Fepetra ilaina amin'ny fampiasana azo antoka Pay atten ...
Fananana simika sy fampiharana ...
Toetra simika an'ny p-hydroxyben ...
Torolàlana momba ny asa ...
Ny bikarbonate Aminoguanidine dia poizina ...
Weier Road, faritry ny indostrian'ny indostria Gulang County, Tuwei, Faritanin'i Gansu